The Fate of Swordsman (2017) - Myanmar Asian TV Channel
2017 Septမှာထွက်ရှိထားတဲ့ Action,Fantasy Movieလေးပါ
တောရွာမှာနေထိုင်ခိုင်းထားတဲ့ မင်းသားလေးကို ဘုရင်မင်းမြတ်က နန်းတော်ဆီပြန်လာဖို့ ဆင့်ခေါ်တဲ့အခါ
မင်းသားလေးနဲ့အတူ ကိုယ်ရံတော်အဖြစ် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ချန်းယန် က ဇီရွန်လူ နဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားကိုလုပ်ကြံဖို့ရောက်လာတဲ့ လုပ်ကြံသူတွေတွေ့တဲ့အခါ ဇီရွန်လူကယ်တင်ခဲ့ရာမှာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားမဟုတ်ဘဲ မင်းသမီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်
မြို့တော်ရောက်သည်အထိ မင်းသားလေး ကခဏခဏ လုပ်ကြံသူတွေနဲ့တွေ့ရသော်လည်း ဇီရွန်လူကြောင့်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်..
နန်းတော်ထဲရောက်တော့လည်းအာဏာရာထူးတွေကြောင့် မိသားစုအချင်းချင်း လက်အောက်ငယ်သူးအချင်းချင်း သစ္စာဖောက်မှုတွေ လုပ်ကြံမှုတွေကို ဇီရွန်လူကကာကွယ်ပေးနိုင်ပေးမယ့်လည်း…
တစ်နေ့မှာ အိမ်ရှေ့စံ မွေးနေ့ပွဲမှာ စစ်သူကြီးကစစ်အင်အားအပြည့်နှင့်တက်ရောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ???
ချန်းယန်ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ ဇီရွန်လူ ရဲ့ဓားပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရနိုင်မရနိုင်ကတော့????
The Fate of Swordanမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ် ..
Translated by Wutt Hmon
Actors: Chen Si Yu, Ma Chun Yui
Openload.co Myanmar 720p Download
ဒီတစ်ခေါက်ကိုးရီယားစုံထောက်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Kwon Sang Woo နဲ့ Sung Dong Il တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် IMDbမှာလည်း 6.5 ရထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုပါ ၂၀၁၈မှာလည်း နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Accidental Detective 2ဆိုပြီး ထွက်လာအုံးမှာဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို အရင် ကြည့်ထားသင့်တယ်နော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့…… ဂန်ဒယ်မန်(KwonSangWoo)ဟာစုံစမ်းထောက်လှမ်း ရတာကို ဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ သူဟာ ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာစစ်ဆေးတဲ့အခါကျရှုံးခဲ့လို့အိမ်မက်ကမဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး အခုတော့သူဟာကလေးနှစ်ယောက်ဖခင်မယားကြောက်ရတဲ့ ခင်ပွန်းသည်အဖြစ် ကာတွန်းစာအုပ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်…
I Belonged to You ( 2016 )
” လူတစ်ယောက်ချစ်မိတဲ့အခါ အဲဒီလူကလွဲပြီး ဘာကိုမှမမြင်တတ်တော့ဘူး ” DJ ချန်မိုဟာ သူ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရပြီးနောက် ပျက်ဆီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ငှက်ကလေးလို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေး သူ့ဘဝထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် …. ချန်မိုရဲ့သူငယ်ချင်းဝတုတ်ကတော့ သူ့တစ်ဘဝလုံးကိုပုံပြီး သူ့ချစ်သူကိုချစ်ခဲ့ပါတယ် … ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ချန်မိုရဲ့ညီလေး မော်ရှီဘ ကတော့ ရဲမေကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့သူပါ … ပေးဆပ်တဲ့အချစ် … ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာအချစ် … ဖြူစင်လှပတဲ့အချစ်တွေနဲ့ သူတို့ … ပုံသေသတ်မှတ်ထားလို့မရတဲ့ဘဝမှာ သူတို့အချစ်တွေ…
ဒီနေ့တော့အားလုံးအတွက် တရုတ်မှော်ဆန်ဆန်ပရောဂဆန်ဆန်ကားလေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးမယ်နော် … ဇာတ်လမ်းကိုအစပျိုးရမယ်ဆိုရင် မှော်လောကသားတွေနေထိုင်ရှင်သန်နေတဲ့မှော်မြို့တော်တခုရှိတယ် … ထိုမြို့မှာ ငယ်ရွယ်ပြီးမှော်လောကမှာနာမည်နှစ်လုံးထဲနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ် … စူယန် လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မသိတဲ့သူ မရှိလောက်အောင်နာမည်ကြီးပြီး သူကအနာဂတ်ကိုလဲကြိုမြင်နိုင်သေးတယ် … သူ့လက်အောက်မှာတချိန်က ဖိန်ဖိန် ဆိုတဲ့ တပည့်မလေးတယောက်ရှိတယ် … ကောင်မလေးကတော့သူဠေးကိုကျိတ်ပုန်းလေးကြွေနေတာပေါ့ … ဒါမယ့်တရက်ရောက်တော့ စူယန်က သူနေထိုင်နေတဲ့မှော်မြို့တော်ကြီးနဲ့ တပည့်မလေးကိုပစ်ထားခဲ့တယ် … အဲ့လိုပစ်ထားရတာကလဲအကြောင်းရှိလို့နော် ……